ချစ်သူတွေဖြစ်နေပါပြီလို့ အတည်ပြုလိုက်တဲ့ So Ji Sub နဲ့ Cho Eun Jung - For her Myanmar
Oh My Venus ကားထဲက မင်းသားချော So Ji Sub ကတော့ အသက် (၄၂) နှစ်မှ လူပျိုကြီးဘဝက ကျွတ်ပြီထင်ပါရဲ့ ယောင်းတို့ရေ။ အသက် (၁၇) နှစ်လောက်ကွာတဲ့ announcer Cho Eun Jung နဲ့ တွဲခုတ်နေတယ်လို့ အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အသက်လေးဆယ်မှ ဘဝစတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်သလိုပါပဲ။
Related article >>> FA တွေကို ယောက်ျားယူချင်စိတ် ပေါက်အောင် လုပ်သွားတဲ့ လင်းရိကျိုး (သို့) တရုတ်မင်းသားချော Xu Kai Cheng အကြောင်း တစ်စေ့တစောင်း
So Ji Sub က သူ့ရဲ့ဇာတ်ကားသစ် “Be With You” ကို ပရိုမိုးရှင်းဆင်းဖို့ Cho Eun Jung ပါဝင်တဲ့ SBS show ကို ပါဝင်လိုက်ရင်း တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။ အဲ့ကတည်းက သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ သူငယ်ချင်းတွေအဖြစ်ကနေ တစ်ဆင့်တက်ပြီး ချစ်သူတွေဖြစ်သွားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။
Related article >>> ချစ်သူတွေပါလို့ ပရိသတ်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်စုံတွဲ (၃) တွဲ
Cho Eun Jung ရဲ့ သွက်သွက်လက်လက်အပြုအမူလေးတွေနဲ့ စိတ်ထားလေးကို သဘောကျတယ်လို့ So Ji Sub ကပြောခဲ့ပြီးတော့ Cho Eun Jung ကတော့ အရင်တည်းက So Ji Sub ရဲ့ ပရိသတ်ပါလို့ ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အသစ်စက်စက်စုံတွဲလေးအတွက် congratulations ပါနော်။ ယောင်းတို့ကော ဒီအတွဲလေးကို ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ?
Oh My Venus ကားထဲက မငျးသားခြော So Ji Sub ကတော့ အသကျ (၄၂) နှဈမှ လူပြိုကွီးဘဝက ကြှတျပွီထငျပါရဲ့ ယောငျးတို့ရေ။ အသကျ (၁၇) နှဈလောကျကှာတဲ့ announcer Cho Eun Jung နဲ့ တှဲခုတျနတေယျလို့ အတညျပွုလိုကျပါပွီ။ အသကျလေးဆယျမှ ဘဝစတယျဆိုတာကို သကျသပွေလိုကျသလိုပါပဲ။
Related article >>> FA တှကေို ယောကျြားယူခငျြစိတျ ပေါကျအောငျ လုပျသှားတဲ့ လငျးရိကြိုး (သို့) တရုတျမငျးသားခြော Xu Kai Cheng အကွောငျး တဈစတေ့စောငျး
So Ji Sub က သူ့ရဲ့ဇာတျကားသဈ “Be With You” ကို ပရိုမိုးရှငျးဆငျးဖို့ Cho Eun Jung ပါဝငျတဲ့ SBS show ကို ပါဝငျလိုကျရငျး တှဆေုံ့ခဲ့တာပါ။ အဲ့ကတညျးက သူတို့နှဈယောကျဟာ သူငယျခငျြးတှအေဖွဈကနေ တဈဆငျ့တကျပွီး ခဈြသူတှဖွေဈသှားခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယျ။
Related article >>> ခဈြသူတှပေါလို့ ပရိသတျကိုအတညျပွုပေးလိုကျတဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှငျစုံတှဲ (၃) တှဲ
Cho Eun Jung ရဲ့ သှကျသှကျလကျလကျအပွုအမူလေးတှနေဲ့ စိတျထားလေးကို သဘောကတြယျလို့ So Ji Sub ကပွောခဲ့ပွီးတော့ Cho Eun Jung ကတော့ အရငျတညျးက So Ji Sub ရဲ့ ပရိသတျပါလို့ ထုတျဖျောပွောပွခဲ့ပါတယျ။
အသဈစကျစကျစုံတှဲလေးအတှကျ congratulations ပါနျော။ ယောငျးတို့ကော ဒီအတှဲလေးကို ဘယျလိုမွငျကွလဲ?
Tags: Celebrity news, Cho Eun Jung, Confirmed, Dating, Dispatch, So Ji Sub
အသက်(၃၀)ကျော်တွေ ဒိတ်လုပ်ဖို့ ခဲယဉ်းသွားစေတဲ့ အတွေး(၄)ခု
Yin Sandi Ko April 26, 2019
ချစ်သူတွေပါလို့ ပရိသတ်ကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တဲ့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်စုံတွဲ (၃) တွဲ
Stella April 22, 2019